Iindaba-Ubhubhane awuzukuphela kungekudala！
"Uqhambuko lwehlabathi jikelele
Ayizukuphela kwiminyaka eyi-1-2 ”
"Isithsaba esitsha sinokuthi ngokuthe ngcembe siguquke sibe sisifo esosulelayo sokuphefumla esikufutshane nomkhuhlane, kodwa ukuba sengozini kwayo kunomkhuhlane." Kwasa nge-8 kaDisemba, uZhang Wenhong, umlawuli weSebe lezifo ezosulelayo, iSibhedlele saseHuashan, iYunivesithi yaseFudan, utshilo kuWeibo. Ngomhla we-7, iShanghai yabhengeza iziphumo zokulandeleka kwamatyala ayi-6 asekuhlaleni aqinisekisiweyo axeliweyo phakathi kukaNovemba 20 no-23. Iindawo ezinobungozi obuphakathi zonke zivuliwe emva kweeveki ezimbini zokuvalwa. Ilizwe elisavaliweyo ngokuthe ngcembe lindindisholo kuzo zonke iintlobo zeendaba, kwaye amathemba okuthintela ubhubhane nawo abonakala ngathi azolile, kodwa iziganeko ezininzi ziveze iimeko ezinokubakho zotshintshiselwano lwehlabathi kunyaka olandelayo. Ungaluqhuba njani utshintshiselwano lwamanye amazwe kwimeko yobhubhane
Ngokuphathelene nokufana phakathi kweShanghai International Expo Expo kunye nezicwangciso zokuthintela ubhubhane zaseJapan kwiMidlalo yeOlimpiki, uZhang Wenhong uthe okokuqala, nge-10 kaNovemba, iShanghai International Expo Expo yavalwa ngempumelelo phantsi kolawulo oluvaliweyo. Abantu abangenayo basebenzise ulawulo oluvaliweyo kwaye balishiya ilizwe emva kwentlanganiso. Zonke iindwendwe ziya kuvavanyelwa i-nucleic acid kwaye akukho miqobo iya kumiselwa. Ngaphezulu kwesigidi se-1.3 sabantu abathathe inxaxheba kwi-CIIE. Uphuhliso lwayo oluyimpumelelo lunokuthathwa njengokuhlolwa kwemisebenzi emikhulu yokunxibelelana yamazwe aphesheya, nangona kunjalo kwinqanaba elincinci.
UZhang Wenhong wazise ukuba kwiveki ephelileyo ebetshintshisene neengcali ezibalulekileyo zokuthintela ubhubhane eJapan. Iziqwenga ezibini zolwazi kufanelekile ukuba ziqwalaselwe. Inye kukuba iJapan iyakubamba iMidlalo yeOlimpiki njengoko bekucwangcisiwe, kwaye enye kukuba iJapan sele i-odole ugonyo lonyaka opheleleyo kunyaka olandelayo. Nangona kunjalo, uphononongo lwezimvo lubonisa ukuba yi-15% kuphela yabantu abanomnqweno onamandla wokugonya, malunga ne-60% bayathandabuza, kwaye i-25% eseleyo ichaze ngokucacileyo ukuba abayi kugonywa. Ukuqala ngendlela kweOlimpiki phantsi kweemeko ezinjalo akunakunceda kodwa kube kukucinga.
Amanyathelo okuthintela ubhubhane abhengezwe yiKomiti yeOlimpiki yaseJapan anokufana okuninzi nalawo eShanghai International Expo Expo. Kuyabonakala ukuba la manyathelo anokuba sisalathiso seetemplate zehlabathi ukuqala ukutshintshiselana kwixesha elizayo. Iimbaleki ezivela kumazwe nakwimimandla enesifo esibuhlungu kakhulu, kufuneka ziye kuvavanyelwa intsholongwane entsha xa ifika kwizikhululo zeenqwelo moya zaseJapan. Ngaphambi kokuba iziphumo zovavanyo zibekhona, iimbaleki zinokuhlala kuphela kwindawo echaziweyo kwaye zenze ulawulo oluvaliweyo.
Ngokuchasene nesicwangciso-qhinga sokulwa ubhubhane kwiiOlimpiki zaseJapan, iiOlimpiki zaseJapan zijolise ekwenzeni uvavanyo lwe-nucleic acid yokungena phesheya kolwandle ukuze kubukelwe ukhuphiswano. Emva kokungena, akuyi kubakho zithintelo zentshukumo kwaye akukho kuvalwa kungena ngaphakathi, kodwa emva kokungena kwi-APP kufuneka ifakwe. Nje ukuba imeko yenzeke, kufuneka kuthintelwe ngqo kunye nolawulo. Amaqhinga okulandela lonke unxibelelwano olusondeleyo kunye nokuthatha amanyathelo othintelo lwesifo. Oku kuyafana neendlela zokuthintela kunye nokulawula ze-Shanghai International Expo Expo kunye nalo bhubhane walapha.
Ukuthintela ngokuchanekileyo kunye nolawulo kuya kuba yinto eqhelekileyo kwilizwe jikelele
UZhang Wenhong uthe ukuthintela kunye nokulawula ngokuthe ngqo kuya kuba yinto eqhelekileyo kwihlabathi liphela. Kutshanje, iindawo ezininzi ezinobungozi obuphakathi eShanghai ziye zavulwa. Isitshixo kuthintelo lobhubhane eShanghai ngeli xesha ikakhulu luxhomekeke ekulandeleleni ngokuchanekileyo kunye nokuhlola ingqesho epheleleyo kwiindawo ezithile ezinobungozi. Oku kukwabonelela ngeendlela zokufumana izixeko ezikhulu kakhulu ukunciphisa ukubakho kweempembelelo ezinkulu kwimisebenzi yezoqoqosho ngothintelo olululo kunye nolawulo.
Ngokwandiswa kwezitofu zokugonya, umhlaba uya kuvuleka ngokuthe ngcembe. Nangona kunjalo, kuba ugonyo kunzima ukuba lubekho ngokupheleleyo (nokuba ziphi na iziphumo zophando ezikhoyo zokugonya okanye inyani yokuba imveliso yelizwe kunzima ukuyifeza inyathelo elinye), ubhubhane wehlabathi awuyi kuphela kwisithuba seminyaka emi-1-2. Nangona kunjalo, kwimeko yokuvulwa kwakhona kwehlabathi kunye nokuqhelaniswa nokuthintela ubhubhane, ukuthintela ubhubhane ochanekileyo kungathi chu kube yinto eqhelekileyo kwihlabathi liphela kwixesha elizayo.
Uthe kwimeko yokuvulwa ngokuthe ngcembe kwehlabathi kunye nokwandiswa ngokuthe ngcembe kwezitofu zokugonya, inkqubo yezonyango yase China kufuneka iphendule kakuhle. Emva kokuba abantu abasemngciphekweni omkhulu begonyiwe, umngcipheko wezithsaba ezintsha uzokwehla kancinci kwixa elizayo, kwaye usenokuvela ngokuthe ngcembe ube sisifo esosulelayo sokuphefumla esikufutshane nomkhuhlane, kodwa ingozi yaso ingaphezulu komkhuhlane. Kule meko, izibhedlele eziphambili kufuneka zibe nesebe eliqhelekileyo lokuthintela ubhubhane kunye nokuphendula, oko kukuthi, isebe lezifo ezosulelayo. Ukuphendula koku, iNkqubo yezeMpilo kaMasipala waseShanghai ibibambe intlanganiso kwiSibhedlele saBantu baqala eShanghai ngempelaveki. Abanye abalawuli besibhedlele abavela kwiYangtze River Delta kunye nePearl River Delta bathathe inxaxheba kwingxoxo edlamkileyo kwaye baxoxa ngokupheleleyo ngekamva le-COVID-19 yezicwangciso zokuthintela kunye nolawulo. . I-China iyilungiselele intsholongwane kunye nekamva elivulekileyo.